Macallin Massimiliano Allegri oo u sheegay Kooxda Juventus inay u keenaan xiddig ka tirsan Manchester United – Gool FM
Macallin Massimiliano Allegri oo u sheegay Kooxda Juventus inay u keenaan xiddig ka tirsan Manchester United
Haaruun July 4, 2021
(Turin) 04 Luulyo 2021. Tababaraha Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa lagu soo warramayaa inuu ku wargaliyay madaxda kooxda rabitaankiisa ah inuu Paul Pogba kula midoobo Magaalada Turin.
Xiddiga reer France ee Manchester United ayaa wali ah qodobka ugu weyn ee looga hadalhayo suuqa kala iibsiga, maadaama uusan wali heshiis la gaarin Red Devils, kaasoo ku aaddan qandaraas kordhin ka badan illaa 2022-ka.
Pogba ayaa la filayaa in la iibiyo xagaagan haddii aanu heshiis cusub la gelin Man United, warbixin dhawaan soo baxday ayaana sheegaysa in loo isticmaali karo qeyb ka mid ah heshiiska ay ku doonayaan inay Kooxda Real Madrid uga soo qaataan Raphael Varane.
Si kastaba ha ahaatee, Shabakadda 90Min ayaa sheegeysa in tababaraha Juve ee soo laabtay Allegri uu doonayo in Old Lady ay wax walba u sameyso sidii ay dib ula soo saxiixan lahayd Pogba xagaagan, iyadoo labadoodaba ay ku riyaaqeen xiriir miro dhal leh intii ay ku sugnaayeen kooxda Juve.
Warbixinta ayaa intaa ku daraysa in Madaxda Man United ay ku kala qeybsameen inay Pogba ka saxiixdaan qandaraas cusub oo uu isbuucii ku qaadanayo 400 oo kun oo gini, arrintaas ayaana kooxda Juve u caddeeyey inay dib ula soo saxiixan karaan xiddigoodii hore ee Pogba.
Paul Pogba ayaa dhaliyay hal gool, mid kalena caawiyay afar kulan oo uu u saftay xulkiisa France intii ay socdeen ciyaaraha Euro 2020, 28-sano jirkaan ayaana ku lug lahaa 80 gool, waxa uu dhaliyey 38 gool, isagoo caawiye ka ahaa 42 gool oo kale 206 kulan oo uu u saftay Man United.
Isku aadka Afar dhammaadka oo dhammaystirmay, sida ay xulalku isugu aadeen & Halka lagu ciyaari doono Semi-finalka iyo Final-ka Euro 2020
Kooxda AC Milan oo beddelka Hakan Calhanoglu ka dhex aragta Real Madrid